Shabeelaha Hoose: Shirkii Nabad Raadinta Beelihii Ku Dagaalamay Shabeelaha Hoose oo Weli Socda Iyo Maleeshiyaadka oo Ku Sugan Marka | POHSOMEV.COM
Shabeelaha Hoose: Shirkii Nabad Raadinta Beelihii Ku Dagaalamay Shabeelaha Hoose oo Weli Socda Iyo Maleeshiyaadka oo Ku Sugan Marka
Marka (RBC) Deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa weli ka socda kulamo wasiiro ka tirsan dawlada federaalka ay la leeyihiin odayaal iyo cuqaal ka soo jeeda beelihii dhowaan ku dagaalamay gobolkaasi deegaano ka mid ah, iyadoo shirarkan ay marayaan dhowr maalmood oo xiriir ah.
Wafdiga dawlada u dirtay gobolka ee ku sugan deegaanka Ceel Jaalle ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka gaashaandhiga Maxamed Xasan Xaamud oo sidoo kale ah sii hayaha xilka wasiirka amniga qaranka, waxaana ay dhowr jeer tageen magaalada Marka gudeheeda iyadoo gudoomiyaha gobolka C/qaadir Maxamed Nuur Siidii uu la socdo.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceel Jaalle ayaa sheegaya in xabbad joojintii ay sameeyeen wafdigan ay meelmartay isla markaana aaney dhicin dagaalo kale tan iyo intii wafdiga wasiirada uu gaaray gobolka, hase yeeshee waxaa weli magaalada Marka ku sugan maleeshiyaadkii qabsaday iyadoo maleeshiyo beeleedkii ka soo horjeeday ay weli ku sugan yihiin duleedka magaalada.
Waxaa jiray baaqyo isdabajoog ah oo lagu codsanayey in maleeshiyaadka laga saaro magaalada, laguna bedelo ciidan dawlada hoostaga oo aan ahayn maleeshiyo beeleedyada, arrintaasi oo illaa hadda aan dhaqangelin.
Wararka ayaa sheegaya in wasiirada ay la socdaan cidamo tiro badan oo laga kexeeyay magaalada Muqdisho, kuwaasoo isugu jira boolis, nabadsugid iyo militariga, waxaana ujeedka ciidankan lagu tilmaamay inay tahay inay la wareegaan amniga magaalada Marka iyo degmooyinka kale ee dhowaan dagaaladu ka dheceen.